Nomena mari-boninahitra…: mbola am-bohitra, ny 16 mey vao halevina i Monja | NewsMada
Nomena mari-boninahitra…: mbola am-bohitra, ny 16 mey vao halevina i Monja
Mpitahiry ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina amin’ny ankapobeny i Monja. Nanaja izay nilofosany izay ny natao manodidina ny fahafatesany ka mbola hnaovana havoria vao hasitrika izy.
Nodimandry, ny 2 febroary lasa teo, i Geze Monja Mahatiahy, fantatry ny maro amin’ny hoe Monja Manitsindava. Fahabangana lehibe eo amin’ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina, satria anisan’ireo nitrandraka, nampahafantatra niaro ary sarotiny amin’ny kolontsaina antandroy i Monja Manitsindava. Fantatra fa mbola am-bohitra ny fatiny, ao Ambonaivo Ambovombe, araka ny fomba any an-toerana.
Nidina tany ny prefet-n’Ambovombe-Androy, i Solofotahina, nanolotra ny mari-boninahitra Officier de l’ordre national malagasy an’i Monja Manitsindava. Niara-dia taminy nandritra izany ny talem-paritry ny Serasera sy ny kolontsaina any Androy, i Mahatozo Razanatolo Kalimahao.
“Atao araka ny fomba nentim-paharazana ny ampombana azy satria mpiaro izay hanitra nentim-paharazana izay izy. Tsy maintsy holofoina izy hamonoana omby maro. Hanaovana havoria, hotontosaina ny 15 mey izao, ka ny ampitson’io vao hasitrika ao Ambonaivo izay niaviany. Araka ny hafatra nataon’i Monja fahavelony, hatao ho toerana azo tsidihina io ka izay tonga mangata-pitahiana eo, hoy izy, dia ampiako. Amoron-dalana rahateo ny fasana”, hoy ny nambaran’ny talem-paritry ny Serasera sy ny kolontsaina.